Ntuzi Ezinụlọ - Ezigbo Ink Inye Ọkụ Ụmụaka maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị
Ezigbo Atụmatụ Nzube nke 24 maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị
Ọ bụrụ na ị na-atụle igbu egbu mmadụ, gụọ n'ihu maka ama ndị ọzọ. Anyị nwere ụfọdụ n'ime ezigbo mkpịsị aka ezinụlọ ị nwere ike ịhọrọ. Mgbe ị na-eche ma ị ga-egbu egbu ma ọ bụ, ị ga-ahọrọ ebe ị ga - esi nweta ya na ahụ gị. Ogbugbu ezinụlọ dị ezigbo mkpa nye ndị òtù ahụ na njikọ nke ya na ya bụ ihe ị nwere ike igosipụta ozugbo ị nwere ya na ahụ gị.
1. Ezigbo Ezinụlọ
2. Ntube Familyoo na ejiji nwoke
Mee nke a, dịka o nwere ike, site na òtù dịgasị iche iche, ọnọdụ dịgasị iche iche ma echekwaghị ihe ndị ọzọ. N'ezie, ọbụna ndị si n'aka ndị uweojii na-eme ka e gosipụta na ha agaghị achọ ka ha kpuchie ha.
3. Ogbugbu ezinụlọ aka
E nwere ezinụlọ ndị ga-achọ mgbe niile ịbịarukwu onwe ha nso na naanị otu ụzọ nke a ga-esi kwe omume bụ mgbe e nwere egbu egbu nke a pụrụ itinye n'aka.
Ihe kachasị mkpa ị ga-atụle, ọ bụrụ na nke a bụ akpagbu gị, ọ bụ ihe igbu egbugbu pụtara. Egbugbu ezinụlọ aghọwo ihe eji egbu egbu egbu egbu nke onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ nwere ike iji kọwaa onye ọzọ.
4. Ụdị Ezigbo Ụkwụ
Maka ụfọdụ ndị ọkachasị karịsịa ụmụ nwanyị, akara olu na-agbakwasị ụkwụ bụ ụfọdụ n'ime atụmatụ ndị ị nwere ike iji mee ka ndị ezinụlọ gị mara.
Ọ bụrụ na ịchọrọ igbu egbu na akụkụ dị mma nke ahụ, ị ​​kwesịrị ịtụle ihe ọ na-ewe nakwa otu ịchọrọ ka ndị ọzọ hụ ya. Ntuchi ezinụlọ bụ ụfọdụ n'ime ihe kachasị mma ị nwere ike iche.
5. Ụdị Ezigbo Aka
Enwere ike iji ụbụrụ na-agbanye aka na-anọchite anya ezinụlọ gị mgbe ịnọ n'ebe dị anya. Ndị ọ bụla na-eche echiche inweta ụfọdụ n'ime egbu egbu kachasị mma #designs n'ụwa bụ mgbe ha nwere egbu egbu ezinụlọ.
6. Ezigbo ezinụlọ egbu egbu
Ezinụlọ dị ruo mgbe ebighị ebi, ọ dịghịkwa ụzọ dị mma ị ga-esi kwuo ya karịa ịkọ ya n'ahụ gị dị ka nke a.
7. Egbugbu ezinụlọ na aka nwoke
E nwere ndị na-ahụ onwe ha dị ka ndị na-achịkọta tattoos na ha ga-emezigharị ọrụ nke #art na ahụ ha site na igbu egbugbu ezinụlọ.
8. Ụdị obi oyi na-egbu
E nwere oge mgbe nwoke ga-abanye ụlọ ahịa igbu egbu ma ha agaghị enwe ihe ọ bụla ha chọrọ. Ọchịchị dị jụụ na-adịghị mkpa ka ọ dị mgbagwoju anya. Mgbe i nwere tattoos ndị a, ndị mmadụ na-anọchite anya echiche gị gbasara ndụ.
Ụfọdụ ndị mmadụ ga-egbu egbu ma ị gaghị aghọta ihe ọ bụ tupu ọ dị na akpụkpọ ahụ gị. Nke a bụ ihe mere ndị mmadụ na-achọ ka ha na ndị ezinụlọ ha na-enwe mmekọrịta chiri anya na-agakarị maka tattoos ndị yiri nke a.
9. Ụdị obi oyi na-egbu ndị ikom
Ị ga-ahụ ihe ọ bụla n'ime atụmatụ gị gbasara nchịkọta ezinụlọ ka a na-atụle tupu ibanye ma ị ga-anakwere ihe edere tupu ya aga n'ihu gị.
10. Ụdị ezinụlọ egbu egbu
Ọtụtụ mmadụ karịa oge ọ bụla ọzọ na ebe nchekwa a na-adịbeghị anya na-etinye aka na ntangọ na-agbanwe agbanwe dịka ụbụrụ ezinụlọ, ha dịkwa ugbu a maara nke ọma, ha aghọwo ihe dị mkpa.
11. Obi na ezinụlọ na egbu egbu na ụkwụ
Na mbụ, akwara bụ ụdị ndụ nke ụmụaka, ha nwere ike iji ọtụtụ ihe mata ma na-egbu egbu mmadụ, onye ọ bụla na-eji ya na akụkụ ọ bụla ha; ụkwụ nwere ike ịbụ ebe mara mma iji tinye ebe ị na-ede.
12. Na-enwe obi ụtọ na-egbu egbu ezinụlọ
N'ọnọdụ ọ bụla na ịchọrọ ịnweta egbu egbu ezinụlọ, ị kwesịrị ịtụle inwe ihe dị ka nke a.
13. Ụdị na-egbuke egbuke na ezinụlọ na ụmụ nwanyị azụ
14. Ụkwụ ndị ezinụlọ Rose
A gaghị eleghara egbugbu ezinụlọ ezinụlọ anya n'ebe ọ bụla ị hụrụ ya. Were ụdị gị na ọkwa ọzọ mgbe ị na-egbu egbugbu ezinụlọ.
15. Egwu egbu osisi
Tụkwasị na nke a, a ga-eji nchịkọta ezinụlọ mee ihe iji ghọta otú ọ ga-esi lee ya anya, na-enweghị mkpa iji nnukwu ego na egbu egbu nke a na-apụghị ịchụpụ n'ụzọ zuru ezu.
16. Ụdị Ezinụlọ Ekwu
17. Ụdị agbụrụ ezinụlọ na-egbu mmadụ
N'agbanyeghị ihe ị chọrọ mgbe a bịara n'ihe gbasara ezinụlọ, e nwere ọtụtụ atụmatụ ị nwere ike iji pụọ na ìgwè mmadụ ahụ.
18. Ezigbo echiche egbu egbu
E nwere ihe e kere eke, akụkụ, dolphins, sharks na ihe dịgasị iche iche ị nwere ike ịnwe, tinyere ntanye uche gị na anụ ahụ gị, ma egbu egbu ndị a bụ nanị n'ụwa a.
19. Ụdị ntu oyi na-eche banyere ụmụ nwanyị na-anọchite anya ezinụlọ
20. Ụfụ ezinụlọ egbu egbu
Enwewo ntinye na nrhoputa nke uzo ndi ozo kwa ubochi a n'ihi na odi mkpa ka ayi na ibe anyi jikota n 'uwa.
21. Nnukwu ụdị igbu egbugbu ụmụaka na-azụ ụmụ nwanyị azụ
Ụmụ nwanyị dị iche iche mara otú e si egosi ọnyà ndị ezinụlọ ha na nke a bụ ihe mere ị nwere ike iji egbu egbu a mara mma.
22. Azụ Ụdị Ezinụlọ
Otu ihe dị ịrịba ama banyere akụrụngwa na-agafe bụ na ha na-ekwe ka onye na-ahụ maka ya hụ ụdị egbu egbu ga-adị n'ahụ ha, na-enweghị nchegbu na ọ dịghị agbanwe agbanwe.
23. Ntucha ezinụlọ maka Guys
Ọ bụrụ na ị na-atụle ịbịaru ọnwụ mgbe niile, Otú ọ dị, ịnweghị ike idozi ụdị nhazi nke ga-adịrị gị mma, mgbe ahụ, nkenke bụ nkwekọrịta zuru okè.
24. Echiche egbugbu ezinụlọ maka ụmụ okorobịa
Tags:agbụrụ ezinụlọ egbugbu maka ụmụ agbọghọ egbu egbu maka ụmụ nwoke
ndị mmụọ oziaka akamma tattoosenyí egbu egbuechiche egbugbuna-egbu egbuakwara isiegbu egbu hennaọdụm ọdụmegbu egbu ebighi ebiegbu egbu mmiriegbu egbu osisi lotusenyi kacha mma enyiakara ntụpọzodiac akara akaraokpueze okpuezeEgwu ugondị na-egbuke egbukena-adọ aka mmaudara okooko osisimehndi imewedragọn dragọnegbu egbuegbu egbu egbuegbugbu egbugbuegbu egbu diamondncha nrọdi na nwunyeọnwa tattoosNtuba ntughariakwara obin'olu oluarịlịka arịlịkaegbu egbu egbuaka akaegbugbu maka ụmụ agbọghọỤdị ekpomkpangwusi pusiegbu egbu maka ụmụ nwokeUche obiAnkle Tattoosụmụnne mgbuụkwụ akaakpụkpọ ụkwụ na-egbuke egbukerip tattoosnduru akwaraagbụrụ eboazụ azụaka mma akannụnụ